IVolocopter, iteksi yekamva apho uDaimler etyale imali | Iindaba zeGajethi
IVolocopter, iteksi yekamva apho uDaimler etyale imali khona
Ayiloxesha lokuqala ukuba umbono uviwe ukuba iiteksi zekamva aziyi kuhamba ngomhlaba, kodwa zihamba ngomoya. Ukongeza, ipetroli nedizili zizibaso zexesha elidlulileyo. Ngoku kuqhutywayo ngumbane. Kwaye ukuba akunjalo Buza uElon Musk kunye neenkampani zayo ezahlukeneyo.
Kodwa kulandela umsonto weendaba, uDaimler-Inkampani yabazali bakaMercedez-Benz-ebefuna ukubheja kwisiqalo saseJamani esiye sakha 'iteksi ephaphazelayo' iminyaka. Imalunga neVolocopter kunye nemodeli yayo yeVC200, isithuthi sombane esipheleleyo esele sisebenza kwaye ezinyangeni ezimbalwa ezidlulileyo senze uhambo lwaso lokuqala ngenqwelomoya ngaphakathi.
Ngokwengxelo yeVolocopter, uDaimler, umtyali mali wetekhnoloji uLukasz Gadowski phakathi kwabanye, utyale imali 25 million ukuze iprojekthi iqhubele phambili.
Kwakhona, inkampani yaseJamani iqinisekisile ukuba ngesi sixa semali, zombini ukukhula kunye nokuveliswa kwemveliso yeVolocopter VC200 kuya kuba lula kakhulu kwaye kuyakhawuleza. Ukongeza, i-CEO yenkampani iqinisekisa ukuba iimvavanyo zokuqala zorhwebo zifuna ukwenziwa ekupheleni kwalo nyaka we-2017 kwisixeko saseDubai.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba i-Dubai yenye yeendawo ekubhejelwa kuzo kakhulu kuhlobo lwezothutho. Kwaye okona kubaluleke kakhulu: luhlaza ngangokunokwenzeka. Kukule ndawo yaseAsia apho ungabona khona iimoto ezingenamqhubi- ngaba ufuna ukuba sikunike igama lomenzi? -, kunye nezinye iiteksi zomoya ezivela kwezinye iinkampani zaseTshayina. Kwaye konke oku kwenzelwa ntoni kwi-2030, i-25% yezithuthi zedolophu ziya kwenziwa zizithuthi ezizimeleyo.
Njengamanqaku anomdla, siya kukuxelela oko IVolocopter VC200 inokuthwala abakhweli ababini ngaphakathi. Ikwayi-VTOL eneerotors ezisibhozo. Oku kuthetha ukuba inokuhlala emhlabeni kwaye isuse ngokuthe nkqo njengehelikopta eqhelekileyo. Kwaye njengenzuzo enkulu ngaphezu kwabakhuphisana nabo, iibhetri zayo ziyatshintshana. Ke ngoko, xa ufika kwindawo oya kuyo, akuyi kuba yimfuneko ukuba ulinde ukuzitshajisa. Ngokuchasene noko, kuya kufuneka kuphela ukubuyisela ezindala kunye nezintsha kunye nokuhlawulwa kwamandla ngokupheleleyo ukujongana nohambo olutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IVolocopter, iteksi yekamva apho uDaimler etyale imali khona
IXiaomi igqitha kwiFitbit kunye neApple kwaye sele ingumenzi wokuqala wezinto ezinxitywayo kwiplanethi